All Tinoda zviri Mwari — Trip LEE
Ngazvisadaro. Hatidi kurarama zvenhengo, vanamwari venhema, uye nzira nokuzvidzora rakanyorovera. Hatifaniri kutendeuka ikoko. Nekuti kunyange pakati matambudziko tinogona kuwana zvose zvatinoda muna Mwari.
Ikozvino ndinoziva tinonzwa vaKristu vanoti nguva yose Mwari zvakakwana, kuti Mwari ndiye zvose zvatinoda, asi haugari kunzwa chaicho. Ko kunyatsoda? Tiri kurarama munyika rawa, vane nyaya hombe. Saka sei Mwari akasangana zvose zvataida? Chii chinombodiwa kutarisa akafanana, Munenge, kunyange kana zvinhu zvose kurovanya yakatipoteredza?
mhando iyi rokutambudzika nokumanikidzwa haasi vatorwa kuna Mwari kana Shoko raKe. Takaona izvozvo muPisarema kubva svondo rapera uye tichazoona zvakare svondo rino chairo rinotevera Pisarema, chitsauko 142. David akanyora Pisarema iri uyewo. Uye chii tichazoona mumunyengetero iri Dhavhidhi akatambudzika, sabatsira, wakaora murume kuchemera kubatsirwa.
Tisati verenga chinyorwa Zvisinei, Ndinoda kupa mamiriro. Tinoona nyaya youpenyu hwaDhavhidhi mubhuku 1 Samuel.
David ndomumwe zvikuru yaizivikanwa varume munhoroondo yenyika. Zvichida Iye kwazvo yakakurumbira nokuda kwake scrappy pakakundwa Goliath. Iye nyonyova chete akakanda vamwe matombo kwaari uye slayed naye. Apo Dhavhidhi akaita kuti, Sauro akanga achiri mambo. Asi vechiIsraeri vanhu vakanga vava kwazvo kwazvo David. Vakatosvika vakaimba nziyo sei zvinoshamisa akanga, kuenzanisa naye kuna Sauro. Akanga kuva yakakurumbira kupfuura mambo, uye mambo haana kufara nazvo. Saka kunyange zvazvo aiva Mambo Sauro chikomborero asati auraya Goriyati, zvino Sauro akatarira Dhavhidhi muvengi wake. Akatanga kuita zvose zvaaigona kuti vamuuraye. Saka apo Dhavhidhi anonyora Pisarema ichi, iye ari run. Iye gamba hondo anenge yashandurwa ikava mutizi. Mambo akaita rufu Dhavhidhi nhamba nomumwe pachigaro chake mazita kukoshesa. Ndicho Dhavhidhi mambo nehondo yake yose.
Uye pano saka muPisarema 142 tinowana David, akavanda akabuda mubako. Iye anotya upenyu hwake, uye ndiyo nhamo kuti anodanidzira kuna Mwari.
Ndinochema kuti ndibatsirwe kusvikira Ishe; Ndinosimudzira inzwi rangu kuna Jehovha tsitsi. Ndinodurura kuchema kwangu pamberi pake; pamberi pake Ndinoti dambudziko rangu. Kana mweya wangu pauchashayiwa simba mukati mangu, ndimwi munoziva nzira dzangu. Panzira yandinofamba nayo vakandivanzira musungo kwandiri. Tarirai rwangu rworudyi uye ona;hapana ane hanya neni. Handina utiziro;hakuna munhu ane hanya nomweya wangu. Ndinochema kwamuri, O Ishe; Ndinoti, "Ndimi utiziro hwangu,mugove wangu munyika yevapenyu. "Teererai kuchema kwangu,nokuti ndiri pakutambudzika; Ndirwirei panavanonditambudza ini,nokuti vondikurira. Akanditsaura kubva mutorongo wangu, kuti ndivonge zita renyu. Ipapo vakarurama vachaungana pamusoro pangu nokuda kwokunaka kwenyu kwandiri. (Pisarema 142, NIV)
Tiri kuzofamba kuburikidza chinyorwa ichi. Uye tave kufunga mana zvinhu chaizvo chatinodzidza nezvaMwari mumunyengetero ichi kubva David. Uye sezvatinofamba nawo, tichazoona kuti kunyange munguva chinosemesa dambudziko, tinogona kuwana zvose zvatinoda muna Mwari. Chokutanga tinoona kuti Mwari ndiye shamwari yedu panguva yokutambudzika.
ini. Mwari Ndiye Shamwari yedu In Mumatambudziko
munhu. Mwari Ane Hanya
Nzira David anonyengetera anozorora ari kubvuma kuti Mwari anoteerera. Iye achipfeka kuti Ane ukama naMwari uye kuti zvechokwadi Mwari ane hanya chii chirikuitika hwake. Zviri chaizvoizvo runako kunoshamisa kana uchifunga nezvazvo. The Mwari wezvinhu zvose hanya ichi mufudzi mupoteri. Vatsoropodzi vangafunga kuti Mwari ane rudo nezvematambudziko edu haasi zvinonyatsokosha kana kuita zvakawanda musiyano. Ndiani anoda shamwari risingaoneki, kana zvose muupenyu hwako mhirizhonga? Asi ivo ungaora zvakaipa chaizvo. Chokwadi chokuti Mwari ndiye shamwari, kuti iye ane hanya, anoita zvose musiyano munyika. Kana kwete munhu ane hanya yenyu ezvinhu anochinja sei sei kana ukavaudza nezvazvo.
Semuyenzaniso, chii chaizoitika kana waya wangu vakabuda, uye panzvimbo kudana waya kambani kwangu ndakadana Internet yangu Zvatinoda. Zvakanaka Ndinogona kudaidza undovaudza vose nyaya yangu waya wangu. Ndinogona kuvayeuchidza sei Ndagara akatendeka mutengi, uye kushingaira pamusoro pavo sei vachinetseka ndiri panguva iyi dzakakura nokuvatema basa. Asi nekuti ndakadana isiri nhamba, havana hanya. Uye havasi kuenda kuedza kuita chinhu nezvazvo. Chaizvoizvo ndine runako chokwadi havasi hanya kunyange kana ndichidana rworudyi nhamba, uye havana kumbova chinhu nezvazvo, asi iwe kuwana zvandiri kutaura. Zvichishungurudza kana kwete mumwe munhu ane hanya.
Zvino ndinoda kuti kufungidzira kuti chii kudai Mwari asina hanya pamatambudziko edu. Tinogona kudanidzira kuna Mwari zuva rose, asi hazvina mutsauko zvachose. Kumbira David kana zvichikosha kuti Mwari ane hanya. Tarisai shure pandima imwe.
Ndinochema kuti ndibatsirwe kusvikira Ishe; Ndinosimudzira inzwi rangu kuna Jehovha tsitsi. Ndinodurura kuchema kwangu pamberi pake; pamberi pake Ndinoti dambudziko rangu.
Uyu murume rokukurumidzira ngozi. Upenyu hwake mungozi. Zvakafanana ari muna muchivako chiri kutsva. Zvakafanana ari kuitwa Vakadzingana kuburikidza thugs vane pfuti. Uye ari nomwoyo wose kuchemera kubatsirwa. Ndinogona kufungidzira Dhavhidhi mubako, vangadikitira sezvo anonyengetera munyengetero uyu.
Uye sezvo Dhavhidhi anonyengetera, anonzwisisa kuti Mwari ndiye shamwari yake uye iye ane hanya. Uye chokwadi kuti anodzinga nzira anonyengetera.
Anoziva Mwari akateerera. Tarisai ndima nhanhatu. Anoti, "Teererai kuchema kwangu, nokuti ndiri pakutambudzika." Zvino Handifungi uyu naye achiedza kugombedzera Mwari kuti ufambe nayo uye kuteerera zvokupanduka. David anoti ichi pamusoro uye pamusoro muMapisarema. Ndinofunga David ari, "Unofanira vakavimbisa kuteerera vanhu venyu patinotaura imi. Saka chindinzwai. Ndiri kutaura. "Zvinoita sokuti akanga tapping naye pamafudzi. se, "Ishe, teerera mudiwa wako. Ndine chimwe chandinoda. "
David aiziva raMwari tikacherechedza. Aiziva kuti Mwari akanga aita sungano nevanhu ava. Aiziva Mwari akanga avimbisa kuti ave navo. Aiziva nezvokuti Mwari akanga anzwa minyengetero yavo uye akavanunura kakawanda. Uye aitarisira kuti Mwari uyu ungadai kuzomunzwa nguva ino uyewo.
mukristu, Unonzwa kunyengetera ruzivo urwu? Kana Unofunga uchingotaura mashoko? Unonyengetera nepfungwa dzaMwari inozoshandisirwa hanya uye kuda iwe? Munyengetero uri kudyidzana chaiye naMwari kana uri kungozvirasa mashoko kumusoro pasirin'i? Ko yokungoti? Zvichishungurudza kuti Mwari ndiye shamwari hanya.
Tinogona kudzidza kubva panzira David anonyengetera. David chaizvoizvo airing zvichemo zvake kuna Mwari. Zvino tinoziva kuti muMagwaro Mwari anotirayira haana kugunun'una uye kunyunyuta. Asi pano David anotiratidza nzira yakarurama zvinyunyuto edu. Haadi kugunun'una uye vakanyunyutira Mwari sevaIsraeri murenje. Iye haasi kunyunyuta nenzira anoisa unhu hwaMwari kana mutongo kupinda mubvunzo. Haaisi Mwari kutongwa.
Oita zvinopikisana. Sezvo tichazoona gare mupisarema raDhavhidhi anosimbisazve kwaMwari. Hapana chakaipa zvinenge zvichemo zvenyu kuna Mwari, asi uzviite nechivimbo maari. Zviri OK kuudza Mwari uri ane ine nguva. Asi kana isu kumupomera yokuva kururama - kana zvinonzwika kana mumwoyo yedu - kuti kana yava chivi.
Asi munyengetero zvakaoma kunzwisisa dzimwe nguva. One rapper, rwiyo inonzi Dear Mwari, akataura nezvomunyengetero seizvi.
"Ndinofunga Iye akabatikana abate mutsetse ndapota / kundiidza sebenzi ndakafunga pamwe nazvo Aikwanisa kuverenga."
Anomutsa pfungwa yakanaka. Mwari achitoziva zvauri kufunga usati muchamuudzei. Kana Mwari anoziva zvinhu zvose, chii pfungwa kumuudza? Inongova chiitwa mukuranga? It inonditambudza apo vaKristu kutaura nezvomunyengetero sokunge huru chinangwa ari tsitsi kuda wako naMwari. Ndizvo nhema.
Tikamuudza nokuti anotinzwa, Anofarira kunzwa kubva kwatiri, uye Iye ane hanya uye Iye anogara achitiitira murudo (zvakawanda pamusoro paikoko). Asi ndapota udzai Mwari matambudziko enyu. Chema kwaari. Nokuti kuchema kwenyu. Simudza inzwi rako. Dzidza kubva kuna David pano.
Anochengeta kuenda. Tarisa zvaanotaura mundima nhatu.
Kana mweya wangu pauchashayiwa simba mukati mangu, ndimwi munoziva nzira dzangu. Panzira yandinofamba nayo vakandivanzira musungo kwandiri.
Kwose kwose David akatarisa, Sauro akanga akahwanda misungo iye. Kaviri akaedza kumuuraya apo airidza norudimbwa kwaari. Akakanda pfumo kwaari uye akaedza ndingomubayirira parusvingo. Sauro akamupa mwanasikana wake nemaune, musungo kwaari. Akaedza kuti mwanakomana wake vabvume, BFF waDhavhidhi, kuti vamuuraye. Zvino Sauro nemauto ake vari pakumutevera. Pane panjodzi dzose dzoro.
Ndinoziva vamwe vedu sokuti tinogona kunzwisisa Dhavhidhi pano. Tinonzwa sezvakaita pasinei nekwatingava kutendeukira pane dambudziko. Tinonzwa sezvakaita hwedu hwose upenyu nyangarara. Ndicho chikonzero tiri kutambudzika. Ndizvo sei Dhavhidhi anonzwa.
Asi iye achiti kana mweya wake waziya, kana mweya wake waziya, kana iye kuremedzwa, ndiye Mwari anoziva nzira yake. Ndiyo Mwari uyo anoziva Achazova kuburikidza.
Mundima mana anoramba achiudza Mwari pamusoro chii chirikuitika.
Tarirai rwangu rworudyi uye ona; hakuna munhu anondiziva. Handina utiziro;hakuna munhu ane hanya hwangu.
D. No One Asi Mwari
David anosiiwa wake uye anosiiwa neshamwari yake yepamwoyo, Jonathan. Iye asingagamuchirwi muumambo. Iye sokuti hapana ane hanya naye, kufanana hapana kungamuponesa. Asi anoenda pamberi paMwari. David anoziva Mwari ndiye shamwari yake uye kuti Mwari achatarisira iye.
Pakaita musiyano zvinoita kana shamwari Vafuratira pamusoro pako. Uye hwemhuri kunzvengwa iwe. Zvino vabatiri havana hanya newe. Uye vavakidzani vako havazivi ani imi muri. Mwari anoziva iwe uye Mwari ane hanya newe. Mwari anonzwa minyengetero yako. Mwari anoziva kuti bvudzi zvakawanda pamusoro wako. Anoziva marwadzo uye nenyonganyonga uri kusangana. Uye mupfungwa iyi, mutendi muna Jesu haana kumbova oga.
Kazhinji tinopedza hwedu kuedza muonekwe vamwe vanhu, kuda kuteerera kwavo uye kuremekedza. Tinoda kuti hanya nesu. Mwari ane hanya! Hapana chivakwa kure chitsuwa kana akasiyiwa apo mutendi achava oga. Mwari anemi. Uye anokuda. Uye hanya.
zvechokwadi, pasina Mwari sezvo shamwari yako ungadai achasiyiwa. It vaizove mwoyo kana Pisarema iri dzakaguma pano. Uye vazhinji vacheme dzenyika here kugumira ipapo. Asi David anoziva kuti kunyange apo anonzwa kupfuura oga uye achasiyiwa, Mwari ane hanya. Uye Anoziva kuti kana Anofanira munhu kumutarisira, anofanira kumhanyira Mwari.
Saka tinogona kuwana zvose zvatinoda muna Mwari, kunyange kana kuti mafungu. Asi zvirokwazvo Mwari seshamwari yedu haisi zvose zvatinoda.
II. Mwari Ndiye Kudzivirirwa Yedu Mumatambudziko
Ndinoda kuuya mufunge chimwe chinhu anoti mundima mana. Anoti, "Handina utiziro." Zvino patinonzwa shoko utiziro, isu vapiwa kuenda ichi dimikira pfungwa. Tinofunga kuti zvinoreva haana munhu kumhanyira. Ndizvo handizvo zvaanoreva pano. Iye zvinoreva Handina musha. Handina yokuvanda. Ndine po- kurara. Ndiri chaizvoizvo panyama pachena. Haana kuva wokusarudza vachiongorora kuti munhu Motel 6. Ndokusaka ari kuvanza akabuda mubako.
Saka tinogona kuwana zvose zvatinoda muna Mwari? Mwari anogona kuva imba kwatiri? Tarisai ndima shanu.
Ndinochema kwamuri, O Ishe; ndinoti, "Ndimi utiziro hwangu,mugove wangu munyika yevapenyu. "
Chokutanga akanga achiti, Handina shamwari, asi iwe uri shamwari yangu. Handina munhu kuteerera, asi iwe unenge nditeererei. Handina mutarisiri, asi imi mukatora Nditarisirei. Zvino iye akati, Handina chero pokugara, asi uri pokugara wangu. Muri utiziro hwangu.
Ndichiri kushanda pane mharidzo iyi ini here zoomed muna pandima iyi. Ndaida kuti zvakawanda kwatiri kupfuura akanaka kofi mukombe ndima. Izvi chaizvoizvo kureva muupenyu chaihwo?
Takaona ichi mutauro utiziro svondo rapera muPisarema 141 wo. Zvino tinoona zvose pamusoro Magwaro. Haafaniri vachiti Mwari ndiye wenyama yake yokuvanda chaiwo. Asi iye ari achiti pakati kwokushaya ake muviri pokugara, Mwari ndiye mumwe rudzi pokugara kwaari. Mwari ndiye utiziro hwake.
Zvinorevei kuti Mwari ave nzvimbo yako yokupotera? Ndinofunga zvinoreva Ndiye wako kudzivirira zvose pangozi newe kunze kwenyika. Kunyange isu wafambira dzimba dzedu kupinda denga kwedu zvishoma panyika zvomutambarakede uye kuvaraidzwa nazvo vemarudzi ose, chinodzivirira vanotova chinangwa pokugara. Zviri kutidzivirira pakukuvadzwa - kubva okunze, kubva mbavha, kubva kumurwisa.
Teerera zvinotaurwa David anoti pamwewo akanyora paaiva mubako.
Ndinzwirei nyasha, O Mwari, ndinzwirei tsitsi, nokuti iwe mweya wangu unotizira; mumumvuri wemapapiro enyu ndichabvisa kupotera,kusvikira madutu yokuparadza vanopfuura. (Pisarema 57:1)
David ari iye kuvanda Mwari. Mwari ndiye ake kudzivirirwa pakuparadzwa. More zvakananga, Ari achiti Mwari mweya wake unotizira. Panguva zvakadzamisisa chikamu ndiani, panguva yake Musimboti, iye anowana utiziro hwake muna Mwari.
ndiye Mwari dzako utiziro nhasi? Chii chauri kuvimba kudzivirira? Chii chiripo muupenyu hwako, kuti kana iwe achirasa waizonzwa pachena uye akazaruka mukuparadzwa? Ko mari yako? Ko chinzvimbo chako? nani asi, Unofunga kumhanya apo munguva yokutambudzika? Where Unonzwa wakachengeteka? Ko kuti ukama kana basa kuti? kana zvakadaro, ipapo hazvishandi unorira Mwari ndiye utiziro hwako.
Kuita Mwari utiziro hwako mamiriro mumwoyo. Zviri dzakadzama kuvimba Mwari wedu kudzivirira. Zviri achiziva kuti Mwari takachengeteka. David anoziva upenyu hwake huri munjodzi, uye iye akatambudzika, asi iye anonzwa akachengeteka. Chokwadi chinoshamisa nzvimbo kuva, asi ichi ndipo mutendi wose munyika inoutadzi hunofanira pachavo. kutambudzika, asi rugare. richishungurudzika, asi tichigara tichifara.
Zvino ndiri kutaura, kuti nekuti Mwari ndiye tidzivirirwe, Iye haruzotibvumiri kuti kutsikwa nemiedzo ipi? Kana. Zvifunge seizvi.
yokurinda ichi Ndiri kupfeka nhasi isapinda. Zvino izvozvo hazvirevi kuti kana ndikafamba panze mvura kana kusiya pamusoro apo ndiri kugeza ndiro, hazvizorevi kunyorova. Chii zvinoreva kuti kunyange kana varindi anoita kunyorova, izvozvo havazoparadzwi. Izvi ndizvo zvakafanana nokuti mutendi. Mwari haana akavimbisa kutitadzisa kuva nedutu, asi Ari Akavimbisa kuti isu havazoparadzwi. Tinogona kutsikwa nedutu, asi hatigoni kuparadzwa.
Zvinorevei izvo? Romans 8 anoteya panze kupfuura mezvinhu zvinhu kwatingafungidzira zvichiitika kwatiri, kusanganisira rufu. Uye rinoti kunyange pakati zvose izvi, tiri vakundi nokupfuurisa kubudikidza naKristu uyo ​​anotida. Romans 8 rinotiudza kuti zvinhu zvose zvichaita zvakanaka vaya vanoda Mwari uye vanonzi sezvaakafunga.
Naizvozvo tarirai, sezvo tidzivirirwe, Mwari wedu kuchatidzivirira zvose zvichaita pakupedzisira nokuda zvakaipa zvedu kana kuparadza. kuti isu uye kunofanira kunyaradza. Nokuti tinoziva kana iye achitendera yandirova isu, zviri zvakatinakira uye nokubwinya kwake. Ndiye tidzivirirwe. Naizvozvo Dhavhidhi akaita, "Ndiani anofanira wenyama pokugara, kana ndine Mwari!"Mwari ndiye nzvimbo yedu chikuru chinodiwa, uye kana kuti chimwe chikonzero kunozadziswa, vamwe vose tarira duku zvikuru.
Saka ndinobvunza zvakare apo iwe kumhanya munguva dzokutambudzika? Ndiri kukumbira zvose vaKristu pano nhasi uye vasiri vaKristu. Ndokupi kwamunoda kumhanya? Vakawanda vedu maimhanya kune zvakaipa. Tiri kuvangira dzinochengeterwa venhema. Uye kuva vakatendeseka, kuti mapenzi. Hazvinei chii kuti pokugara chenhema, kana uri munhu kana ane muropa - zviri ngozi. matumba zvenhema nhema kwatiri. Vanoita vakachengeteka, asi pakupedzisira ivo chete akatisiya zvakawanda pachena. Havazosimudzirani inotidzivirira kubva pakuparadzwa.
In Deuteronomy, Mosesi anotaura sei Mwari achapindura vanhu Vake zvidhori.
Ipapo achati, “Varipiko vamwari vavo vari [kutaura dzezvidhori zvavo], dombo iro Vakatora utiziro… Ngavasimuke uye kukubatsira; ngavave uzvidzivirire.” (Deuteronomy 32:37)
vanhu vaMwari vakarwiswa nemamwe marudzi, uye vanamwari venhema vakaisa tariro yavo - dzavo dzenhema matumba - havana kukwanisa kuvadzivirira. Musaita chikanganiso chavo.
wo, regai kuita chikanganiso kufunga unogona chete kuti Mwari utiziro wako kana kuti nguva. Imi tikangogara kumirira kana rikawana zvakaipa kusvikira zvino uchava kuvanda Mwari. Izvi zvinoita njere zvachose. Iwe usamirira kusvikira dutu rinouya kuvaka imba. Uchigara mumba, uye muri akadzivirirwa kana inotanga kunaya. Haufaniri kutya kana atanga drizzling, nokuti kare hwakavigwa pachako maari. Izvi zvinotanga akatendeuka kubva pachivi uye tichivimba naye, kuti iwe vaizodzivirirwa pahasha dzake vakarurama. Uye mberi kuburikidza achimhanya shure kwaAri zuva pashure zuva nezuva.
Zvino sezvo isu kutaura nezvaMwari kudzivirirwa, hatigoni kurerutsa chokwadi kuti vakaroorana mazuva apfuura chinhu chinosemesa zvakaitika Newtown, Connecticut. Mumwe vakawanda kurwiswa izvi pamusoro chikoro. Zvaiva muduku chaizvo vana vashanu uye matanhatu gore vane vana vane makore. Izvozvo zvinofanira isu akatsamwisa uye shungu isu. Uye njodzi zvakadai kuti vanhu vanobvunza mibvunzo.
mukristu, chii chauri kuenda kuudza shamwari yako kubasa anoti, "Mwari wako ari kupi pakati ichi? Nei asina Iye kudzivirira vana vasina mhosva? Sei kurega izvozvo zvichiitika?"Ko iwe unoti kuti?
Chii ndinoti? Ndinofunga ndaizoti, Handizive. Wadii ini pachinzvimbo? Handizive. Handidi kupa vamwe mhinduro ouzivi nezvedambudziko zvakaipa. Hapana anoda kunzwa kuti. Ndinofunga aizongoti handizivi nei, asi ndinovaziva Mwari. Uye Iye wakanaka. Mwari haana akatiudza zvose chaizvo pamusoro nei achibvumira zvimwe zvinhu, asi Akatiudza chii Iye akaita. Tinoziva Iye wakanaka, uye akachenjera, uye vakakwana. Ari kare vakaedzwa kuti. Saka zvose Ndinogona kuita vanomutenda, muchinyengeterera vaya vakatambudzwa, uye yeuka kuti hapana mamiriro ezvinhu zviri zvokuti chaityisa kuti hatigoni dzinovangira Mwari.
Nekuti kunyange zvikuru mwoyo dzinoshungurudza mamiriro ezvinhu, tinogona kuwana zvose zvatinoda muna Mwari. Ndiye shamwari yedu uye yedu mudziviriri, asi pane zvakawanda.
III. Mwari ndiye Pfuma wedu Mumatambudziko
Ndinochema kwamuri, O Ishe;
Ndinoti, "Ndimi utiziro hwangu,mugove wangu munyika yevapenyu. "
David anodana Mwari mugove wake. Iri shoko mugove zvinoreva mugove. Saka izvi anogona kureva mugove wenyu ive nhaka - mugove wako pane vakanga vasara shure. Zvinogona kureva nezveimwe mubayiro kuti kodzero yenyu. Saka ake ezvinhu aripo, David ane chinhu. Iye kure nomusha wake uye asisiri Nyasha dzemutendi zvakanaka wamambo.
Saka iye akati, "Handina mugove, ive nhaka, mubairo. Mwari, uri mubairo wangu. Muri pfuma yangu. Muri zvose wangu!"Mwari akanga zvose Wake.
Ini nomudzimai wangu takanga kuona vhidhiyo iyi ESPN vhiki rino inonzi akaputsa. The inonzi yaiva pamusoro vatambi avo panguva imwe nguva vaiva yeshoroma, asi akawana pachavo zvachose akaputsa. Vamwe vakomana ava chaizvoizvo akaita mazana emamiriyoni, asi vakaridza izvozvo zvose pamusoro dzimba, motokari, mbatya, uye mararamiro zvinodhura. Vaigara sokuti zvinhu, zvinhu, vaiva zvokuvakisa pfuma yavo. Zvino vakati vakarasikirwa zvose, havana kuziva zvokuita. mugove wavo wakange aenda.
Zvadaro pane mukomana akafanana MuApostora Pauro. Ndivanaani VaFiripi anoti iye akadzidza kugutsikana, kana kuti akapfuma kana iye murombo. Unoda kuziva zvakavanzika? Aiziva kuti zvose zvechokwadi aida aiva Kristu. All aida aiva Kristu. Akanga achida kukanda zvose kure kuti ave Kristu. Mwari akanga pfuma yake. Rega Unoda kuti pfungwa?
sezvo A.W. Tozer akaiisa rake rinonzi The Kutsvaka Mwari, "Munhu ane Mwari pfuma yake ane zvinhu zvose muna One."
b. Joy Not Kuvakirwa Mari
Tichifunga izvi, mufaro wedu haagoni kuva contingent pamahombekombe yedu nhoroondo. mufaro wedu uye rugare haagoni kukwira uye pasi sei mari kugadzikana tinonzwa, ndiro muedzo dzimwe nguva. Tinoda kuva dombo chivimbo yakasimba Mwari, anoshanda nesimba kugovera, asi kuti anovimbawo Mwari kupfuura mari. Unogona kuvimba mari, asi kuti ipfungwa dzakaipa. Hapana mari kuti hazvigoni nomukondombera kana kubiwa. Mari hakupfuuriri, asi Mwari. Anofanira kuva pfuma yedu, kunyange munguva yokutambudzika.
Ungaita sei basa rako nenzira prioritizes Mwari pamusoro mari? Ko chido chako uye kutsvaka mari, kuti kutsvaka kwako Mwari kutarisa chirema uye lackluster? kana zvakadaro, Mwari murege zvechokwadi kuva nepfuma yako. Unogona kumuona sezvo mubayiro wenyu vechokwadi.
Zvino akati kuti Mwari ndiye zvose kuti tinodirei hakusi kutaura zvose kwedu zvimwe zvinodiwa apere. Uye ichi hachisi rudano tingatanga kuregeredza zvose zvenyu zvimwe zvinodiwa. Asi kudanwa kuvimba zvakawanda pamusoro wako chikuru chinodiwa.
C. The Land Wevapenyu
Unoona kuti David anoti Mwari ndiye mugove wake munyika yavapenyu. Ari vachiti Mwari ndiye zvose zvandinazvo uye zvose zvandinoda izvozvi muupenyu huno. Saka asina vachiti Mwari ndiye pfuma yake chete chinotevera upenyu. Ari achiti izvozvi, Mwari ndiye zvose zvandinoda.
Ndinoziva kuti pane vamwe vedu pano nhasi vasina zvose tinoda, uye pamwe kwete zvose zvatinoda. Asi kana mune Mwari, kukurudzirwa. Vachirumbidza Mwari kuti zvako chikuru chinodiwa watopiwa vakasangana Kristu.
Kunyange kana isu sokuti tiri kushaya, tinogona kuwana zvose zvatinoda muna Kristu.
IV. Mwari Ndiye Mununuri Wedu Mumatambudziko
Mafirimu Superhero ndivo hombe izvozvi. Zuva nezuva raunotarisa pane itsva gamba kufirimu. Batman, Superman, Spiderman, Monkeyman ... kungoona kana vakanga vachiri kuteerera. Ipapo une mamwe marudzi chiito mafirimu akafanana Kuendeswa uye James Bond. Tinoda kufanana nemhando iyi mafirimu, nekuti tiri kungokangaidzwa hombe kupfuura upenyu magamba ndiani anogona kuponesa zuva apo vose anotarira kuzvibatsira. Well David anorondedzera yakafanana mufananidzo pano Mwari. Tarisai ndima nhanhatu.
Teererai kuchema kwangu,nokuti ndiri pakutambudzika;Ndirwirei panavanonditambudza ini, nokuti vondikurira.
b. Desperate Chinodiwa
David zvakare ari kuudza Mwari sei aanoita. Ari kuda. David ari panoperera pachake. Hapana kuti iye kana kuti mumwe munhu anogona kuita kuti kumuponesa. Ari dambudziko. Uye nhamo ichi kuti anoenda Mwari. Zvakare David anoziva nezvaMwari. Anoziva kuti Mwari anoita zvisingagoneki. Iye ndiinazvo atoona Mwari kuita zvisingabviri muupenyu hwake nevamwe hondo vaizoenda vakarwa. Kana Mwari anogona kupa samapere, uye hofori, nemauto muruoko rwake, ipapo zvirokwazvo iye anogona dzinyaradzwe imwe kuzvidzora yakazara mambo.
asi tarirai, hamukumbiri kuti chinhu kana hauzivi uri kubatsirwa. mwanakomana wangu unodanidzira pamusoro zvokudya, nekuti anonzwa nzara uye anoziva zvaanoda chikafu. David anonzwa kuti apererwa kudiwa uye inotungamirira naye acheme kuna Mwari. Anoziva kuti vaya umuteverere vakakukurira iye. Aiziva kuti Mwari chete aigona kumusunungura iyi kunyanya ezvinhu.
Uye iwe cherechedzai sei Dhavhidhi anobvunza. David haakumbiri sokuti haana kodzero rubatsiro urwu. Mundima imwe anoti ari kukumbira "tsitsi." Iye vachikumbira kwete kuti awane chii akakodzera, asi pachinzvimbo chinhu haakodzeri: kununurwa. Uye zvose minyengetero yedu inofanira kuva zvakafanana. Kuzviisa vachiziva kuti uri simba. Hatidi vakakodzera chinhu. Asi isu tiri kukumbira Mwari kuti ngoni kutinunura.
Kazhinji ndinozvibvunza kuti sei ndinogona kubatsira shamwari chiri chinzvimbo seizvi. pachena, Ini handidi ingotaurai "Mwari ndiye zvakakwana" uye rerutsa avo ezvinhu. Chinhu choga Ndinoziva kuita kuvabatsira kuwana kunzvimbo Dhavhidhi. Sezvo kereke iyi nzira yatinogona kushumira mumwe munguva kuda. Vabatsirei kusvika pakuguma pachavo kana ivo vanoziva kumuda kwavo uye kuvimba naye zvakawanda. Kuvanyengeterera, kuvada. Kazhinji ndizvo zvose zvatingaita.
C. Akaraira To Ask For Help
Hwaizova ufuza Dhavhidhi kufunga anomhanyira mumwewo, kana izvi zvakanga zvakajeka kubva ake, uye vamwe kudzora. Ndizvo zvazvakaitawo kwatiri, asi isu kumhanya kumwewo dzimwe nguva. Asi isu anodana kuuya kwaari.
…Udane kwandiri pazuva rokutambudzika; Ndichakurwira iwe, ini ndichava newe kukudzwa. (Pisarema 50:15)
anoratidza Mwari pachake kakawanda muMagwaro somununuri. Sei pamusoro chii Mwari The Red Sea? Zvakadini muupenyu Joseph? Zvakadini hondo dzakawanda? Kana zvose anotarira hazviiti, Mwari vanogona kununura. Hakuna muvengi anogona pemurairo vangamudzivisa. Mauto kuwa pamusoro, makomo kukotamira pasi, uye mhepo nemafungu kumisa pamberi Wake. Uye njanji kwake chinyorwa haimbodaviriki. Akatoenda zvakawanda kuti atinunure pachivi.
Munyengetero mupisarema rino, pamwe pakutambudzika kwayo uye yokukurumidzira, kunondiyeuchidza werimwe munyengetero muBhaibheri. Saizvozvo, munhu achinyengetera ari zvikuru paya hama romunhu uyo ​​akanyora Pisarema iri. Rinondiyeuchidza munyengetero waJesu mubindu reGetsemane. Jesu anoziva Achazova muchinjikwa. Uye Iye unoreverera naMwari, uye rinonyanya anomubvunza kana pane imwe nzira. Anoda kuti vanunurwe marwadzo yaiva mberi kwake. nokurwadziwa kwake akanga zvakadzama kuti sweated ropa.
Mwari haana kununura Jesu kubva kurwadziwa uye sanzwisisika kutambura kuti aiva mberi kwake. Asi Jesu haana kuedza kupukunyutsa. Akaziva izvi ndizvo Akauya kuita. Jesu akafira pamuchinjikwa. Zvino Jesu akarembera pamuchinjikwa, Akanga kutambura kuti ini iwe uye asingadi kuita. Akanga achitora kurangwa nokuda kwezvivi kuti haana kupara. Akararama upenyu hwakakwana, Akanga asina kugumburwa Mwari. Akanga asina kufanana David, kana iwe, kana ini. Tiri vatadzi avo Ndakaita Mwari mutsvene. Akanga asiri mutadzi, asi iye akafa mutadzi wacho rufu pamuchinjikwa. Akanga kurufu, kuitira kuti isu vaigona kununurwa.
Uye Ari kutidanira, kwete kuti anunure pachedu, asi kuvimba muna Hero vaiuya kwatiri kuwana. Hatifaniri muhondo iyi, isu chete kuomerera Uyo anotova. Tenda paari. kuvimba naye. Upenyu hwako kwaari.
Chokwadi, kana usina zvechokwadi kuvimba Kristu, Mwari haasi shamwari yako munguva yokutambudzika. Haana akavimbisa kudzivirira. Haana akavimbisa kuti pfuma yako kana wako ndewangu. VaKristu nepa zvakandivhundusa nguva, asi nyaya yedu rinopera kununurwa. Zvine ndezvenyu?
E. The Chikonzero Deliverance
Akanditsaura kubva mutorongo wangu,kuti ndivonge zita renyu. Ipapo vakarurama vachaungana pamusoro pangu nokuda kwokunaka kwenyu kwandiri.
Pano anoita zvakajeka nei achida ucharwirwa, nei anoda kusunungurwa - nokuti Anoda kurumbidza Mwari ave mudzikinuri wake. Anoona ichi sezvo mumwe mukana kuti Mwari aratidze Pachake kure.
mukristu, unonzwa sei kana Mwari wakaisa iwe? Ndinogona kufunga zvakawanda, nguva zhinji apo ndainzwa munhamo uye akateterera Mwari kuti tsitsi. Ndakanzwa sezvayaiva chaizvoizvo pakuguma kwenyika. Uye Mwari akapindura munyengetero wangu. Uye ndakafara chaizvo. Ini vakakanganwa zvachose nezvaMwari. Handina kumurumbidza. Handina vagomukudza. Ini akakanganwa nezvake. Uye kunyange vakakanganwa zvaAkaita, izvo zvinoita penga.
Pandaiva muduku mbudzana, ari womumhuri gore rangu rakanga Krisimasi. Uye zuva rangu yakanga yakapoteredza nguva ino zvakare saka zvakanga imwe inokosha. Panguva iyi muupenyu hauna zvakawanda. Unofanira cheerios, wava naptime, uye wava Christmas. Ndakaona guru vhiri zvokushambadza paTV uye ndakanga zvakafanana, "Ini gotta nahwo." Ndine guru vhiri. Uye ndinofunga kuti zvichida misodzi yomufaro.
Zvino hazvingabatsiri chinoshamisa kana ndakabvunza kuti kwemwedzi nemwedzi, asi kana ndaisvika kuchikoro uye vanhu akandibvunza chii Ndine, Ini Wakanganwa kutaura izvozvo? Zvinoshamisa here, kuti tinogona kuteterera Mwari Tinzwirei tsitsi, asi mazuva Kwapera kukanganwa sokunge kumbobvira zvaitika?
Tinofanira kuita zvose zvadzinogona kuti rangarirai nyasha dzaMwari uye kukudziridza mwoyo chaizvo, kana zviri journaling kana muchinyengetera nevamwe. Ita chero zvinotora.
Panoperera muPisarema, David anoti vakarurama kuunganidza neZvake. Iye zvinoreva sezvaakaita anorumbidza Mwari nokuda kwokunaka kwake, vamwe vatendi vachabatana naYe. Izvi ndizvo zvatinofanira kuita musi weSvondo usiku sezvo tine uchapupu izvi kwenyasha. Tinonzwa runako rwaMwari uye patinoungana kumativi mumwe uye ndinomurumbidza pamwechete. Chokwadi mununuri mukuru.
Hapana mamiriro ezvinhu zvokuti chaityisa kuti Mwari haakwanisi vachikukumikidzai. Apo pasina munhu anogona kununura iwe, Mwari ndiye mununuri wako. Anovangiramo.
Ndinorangarira sezvo mbudzana, vachifunga kuti vabereki vangu aizogadzirisa zvose. Hazvina hazvo basa chii chakaitika, Baba naAmai aigona kuchigadzira. Ndingadai ndisina vaifungidzira kuenda kumba nevavakidzani ', kana kudana hama. Ndakaenda kuna Baba naAmai, nekuti chavainacho ini. Handina kuziva kuti sei, asi ndaiziva vaiva neni.
Tinofanira kutenda sevana mhando ichi. Nokutenda kuti achipfeka, pasinei dambudziko, Ndinogona kuenda Mwari nokuda zvandinoda. Ngatitorei kunyengetera.
Kathy • Kubvumbi 16, 2016 pa 6:28 ndiri • pindura
Wagona kutaura! Ndatenda, hanzvadzi konama,